VISA USALỌ USA MGBE 12.04.2021
site n’aka onye edemede: Maxim Chernyshkov Ọnwa Nke Anọ 30, 2021
Ndị ọrụ US na Russia kwụsịrị ịnakwere ngwa maka ịnye visa na America site na Mee 12, 2021. Ndị Russia niile gbara ọsọ ka ha detuo na US Consulates na Kazakhstan na mba ndị ọzọ - mana enweghị ohere na ọnọdụ na-akawanye njọ site na nke abụọ!
Otu esi enweta visa US
Ebee ka a nabatara akwụkwọ ugbu a?
N'oge ahụ ikike nke visa US emeputa ebe obula enwere ndi nnọchi anya obodo nke obodo enyere. Mana nke a metụtara naanị ndị gafere n’enweghị ajụjụ ọnụ. Nyere nke visa US enwere ike ịdabere na ọnọdụ ndị a:
O kwesịghị ịbụ ihe karịrị ọnwa 11 site na mgbe visa ikpeazụ mechara;
Nwaamaala na-enyefe Mbipụta n'otu ebe ọ chọrọ nweta visa ndị America;
Na-emeghachi n'otu mba ahụ nke natara ya.
Ọ bụrụ na nke a abụghị maka gị, mgbe ahụ azịza ajụjụ a:Otu esi enweta visa US"Na-egbu oge ntakịrị. Ga-achọ inwe ajụjụ ọnụ. A naghị ejide ha na Russia ugbu a, yabụ na ị ga-efega mba ọzọ ejidere ha. N'otu oge ahụ, mba dị iche iche na-ebipụta nọmba kacha nso nke ị nwere ike ịga nyochaa.
Etu esi etinye akwụkwọ maka visa ndị njem na United States?
Na ebe a bụ ndepụta nke akwụkwọ ndị dị mkpa achọrọ nweta visa ndị America, nọgidere bụrụ otu. You ga - achọ:
Ngwa maka a njem nleta visa ka America;
Paspọtụ mba ọzọ ga-akwụsị ma ọ dịkarịa ala ọnwa 6 site na ụbọchị nke ngwa;
Foto dị 5 centimita 5.
Ọ bụrụgodị na i chere esi tinye akwụkwọ maka visa njem nleta na United States, mgbe ahụ ka mma ị ga-eche banyere ihe ị ga-akpọrọ gị gaa ajụjụ ọnụ gị ozugbo. Ebe ọ bụ na ihe niile kwuru na ọ ka mma ịkwado na enyemaka nke akwụkwọ. Nke a na - eme ka ohere dị mma pụta.
Ihe ịkwesịrị inye ma ọ bụrụ na ị na-abanye maka nlekọta ahụike
Mgbe ụfọdụ kwa, ọ dịghị mkpa ka ị chee echiche -esi mee ka visa na USA. Ọ bụrụ n’ịbịa nweta nlekọta ahụike dị mma, mgbe ahụ ịkwesịrị inye akwụkwọ. N'etiti ha:
Leta onye dọkịta nwere nkọwa zuru ezu banyere ọrịa a na ihe ndị mere ọ ga-ejirịrị na ọgwụgwọ aghaghị iwere ọnọdụ na United States;
Leta si n'aka dibia America obula nke okwado na ya di njikere igwo gi. N'otu ebe ahụ, ọ ga-egosi ego, nke ga-agụnye ego ọgwụ, yana ọnụego mmanụ a honeyụ. ndị ọrụ.
Nkwupụta nke ibu ọrụ ego sitere n'aka ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ iwu kwadoro ga-akwụ ụgwọ niile maka njem na ọgwụgwọ gị. Ikwesiri inye akwukwo nkwuputa ego na akwukwo ndi ozo nke kwadoro ego.
Otu esi aga mba ofesi n’oge oria ojoo
Otu esi enweta visa America, ọ bụrụ na ịnabataghị gị n’obodo? E kwuwerị, ọrịa ahụ na-egbochi mmegharị n'ụzọ dị ịrịba ama. Ọtụtụ mgbe, a na-etinye ọrịa, ụlọ akwụkwọ na njikọta ezinụlọ n'ime ezigbo ihe kpatara ya.
Ma nzute na consulate maka inweta visa njem nleta na America ẹda nte ukpono. Mana maka nke a ịkwesịrị ịnweta visa Schengen. Enwere ike ịnweta ya ugbu a na Consulate Greek. N'eziokwu, ha nwere ike jụ ịjụ inye Schengen. Mgbe ahụ visa na America maka ndị Russia ga-aghọ ihe na-agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na enweghị ikike obibi na mba Europe ma ọ bụ ụmụ amaala nke abụọ.
Dịka nhọrọ ọzọ maka ndị ọchụnta ego na ndị ọchụnta ego - tinye ngwa ngwa maka nwa amaala nke abụọ nke otu mba Caribbean na-enye ụmụ amaala site na itinye ego:
Nwa amaala a na-eme ka o kwe omume inweta visa 10 afọ na America ma chefuo nsogbu niile!
Ọ bụrụ na visa nke afọ 10 na United States ezughị gị - enwere ohere ịnweta visa E-2 Investor, maka nke a, ị kwesịrị ị toa ntị na mmemme ụmụ amaala nke abụọ na Grenada - nke a bụ naanị mmemme nke ahụ ga - enyere gị aka inweta visa nke ụdị a na America.
Kedu otu nwa amaala nke abụọ ga-esi enyere gị aka ị rute America?
Abụọ amaala meghere ụzọ maka inweta visa na America maka ndị Russia. Site na ndabara, ndị bi na mba anyị nwere ike ịmepụta akwụkwọ maka afọ 3. Mgbe ahụ, ị ​​ga-mkpa imelite a njem nleta visa ka America.
Ma oburu na inwere onwe gi dika nwa amaala nke otu n'ime obodo ise nke Caribbean, inwere ike itinye akwukwo inweta visa njem nleta na United States maka oge nke 10 afọ. Ọzọkwa maka ndị investors, ụmụ amaala nke Grenada ga-abụ ezigbo enyemaka. Ọ na-ekwe nkwa visa E-2 maka oge 5.
Onye ndụmọdụ AAAA ga - enyere gị aka sonye na ọrụ itinye ego na mba ndị nwere mmasị ịbanye na ndị nwere onwe ha. AAAA ADVISER bụ onye ọrụ ikike maka mmemme ụmụ amaala gọọmentị dabere na ntinye ego nke ndị kwabatara. N'ebe a, ị ga-enweta enyemaka na ndụmọdụ ọkachamara n'okwu niile gbasara ịnweta ikike obibi ma ọ bụ ịbụ nwa amaala site na itinye ego.
Kpọtụrụ ọkachamara anyị na anyị ga-adụ gị ọdụ na nhọrọ niile maka ịnweta ikike obibi, obibi na-adịgide adịgide na ụmụ amaala nke abụọ +79100007020
Gaa na saịtị anyị: VNZ.SU
↑ Visa US ↑ visa na america ↑ visa na USA 12.04.2021/XNUMX/XNUMX ↑ visa na America 12.04.2021/XNUMX/XNUMX ↑ esi enweta visa na USA ↑ esi nweta visa na America ↑ ụzọ ọzọ iji nweta visa na USA ↑ ụzọ ọzọ iji nweta visa na America ↑ USA inweta visa ↑
2021, AAAA Onye Ndụmọdụ LLC Na ikpo okwu Shopify